Nyowani ane makore zana emakore ane nyuchi uye rumwe ruzivo rwesainzi - teles relay
Nyowani yemamirioni ane makore egore uye rumwe ruzivo rwesainzi
100 miriyoni zera zera nyuchi yakadzikwa mu amber. George Poinar / OSU.
• Ndine zera remamiriyoni zana emakore, ndiyo tsaru yenyuchi yekare yakawanikwa.
• Paimbove iripo turkey ukuru uye huwandu hwemota.
• Iyi jellyfish inotumira kuruma maburi kuuraya mhuka yaibata kubva kure. (MuChirungu)
• Hippos yakaunzwa muColombia naiye Pablo Escobar vakawedzera kusvika pakuvhiringidza rwizi rwemvura rwemvura kwavanobuda.
• Ndira 2020 yaive kunopisa Januware zvachose papasi kubva pakutanga kwemishumo yemamiriro ekunze. Uye, mazuva mashoma apfuura, iyo 20 ° C chiratidzo chakapfuura pane chimwe chezvitsuwa zviri padyo neAntarctic peninsula...
• AFP mushumo pamwe neMétéo-France vanoongorora, panguva yekushanduka kwemamiriro ekunze.
• Vanosvika mamirioni 3,8 vanhu veFrance gara mugwenga rekurapa.
• Anoshaya wekuChinese ane makore makumi masere, utachiona hweSARS-CoV-2 coronavirus, vakashaya muFrance. Iko kufa kwekutanga nekuda kwehutachiona uhu kunze kweAsia.
• Maererano nekudzidza, kukura kwevasikana vadiki kunoitika rinenge gore rapfuura kusvika pakupera kwa1970. (MuChirungu)
• Kuvhiya rakabudirira robhoti-rakabatsira microsurgery, kubatanidza midziyo gumi shoma yemamirimita.
• MuDNA yeWest Africa Tsamba dzebazi remunhu zvino dzanyangarika zvasara. (MuChirungu)
• Kubudirira kuenda shure kwe Solar Orbiter, probe iyo ichaita "Tarisa Zuva mumaziso". (Subscribers)
• Iyo yazvino inoongorora pa Arrokoth, chinhu chakasaririra chekudenga chakamboshanyirwa nechaitika nzvimbo. (MuChirungu)
• Chii yaitaridzika sepasi rekare ? (MuChirungu)
• Iyo yekubikira ye gadzira mabhuru makuru emabhuru. (MuChirungu)
Tumira ne e-mail
Shandisa pane Whatsapp Shandisa pane Whatsapp
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2020/02/15/une-abeille-de-100-millions-d-annees-et-autres-infos-scientifiques_6029711_5470970.html
Imwe yemahofisi makuru eAfrica bauxite anofanirwa kucherwa muCameroon muna 2022, Canyon Resources inozivisa
Niger inodzosera iyo Extractive Maindasitiri Transparency Initiative (EITI)